Shiinaha Darajada Sare ee China Wood Oil saafi ah iyo dabiiciga ah Tung Oil CAS warshad 8001-20-5 iyo alaab-qeybiyeyaal. Aragtida
Saliida loo yaqaan 'Tung oil' waxaa loo adeegsan jiray keyd ahaan maraakiibta qoryaha. Saliida waxay dhex galeysaa alwaaxa, ka dib wey adkeyneysaa si ay u sameyso lakab biyo-biyood oo aan la dabooli karin (biyaha celiya) ilaa 5 mm qoryaha. Kahortag ahaan waxay waxtar u leedahay shaqada bannaanka ka saraysa dhulka hoostiisa, laakiin lakabka khafiifka ah ayaa ka dhigaya mid aan faa'iido u lahayn ficil ahaan.
Magaca Kiimikada: Saliida Tung
Erayo la mid ah: Shiinaha Saliid Alwaax ah
1. Saliida Tung waxay noqon kartaa walxo ceyriin ah oo ah rinji & khad. Badanaa u isticmaal sida biyo-xireenka, xinjirowga lidka ku ah, daboolka antirust ee dhismaha, mashiinada, Hubka, gawaarida iyo maraakiibta, qalabka kalluumeysiga iyo qalabka korontada; sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo Maro, warqad, saabuun, sunta cayayaanka iwm ....
2. Saliida Tung waxay ku daadan kartaa dharka alwaaxa oo ilaalin kartaa, noqo aalad biyaha ka baareysa markii aad samaynaysid maro iyo waraaqo.
3. Saliida Tung waa sheyga ugu weyn ee soosaarka rinjiga, khadaka, sida dhismayaasha, mashiinada, gawaarida, hubka, qalabka korontada, biyaha iyo anshaxa sunta, iyo soosaarka dharka, warqada, saabuunta, sunta cayayaanka iyo dawada wakiilka mataga, sunta dila cayayaanka.
200kg / durbaan
Jaale khafiif ah oo caano huruud ah dareere saliid leh
Hore: Warshad waxay bixisaa darajo sare 95% Phytol dabiiciyan oo leh qiimo wanaagsan CAS 150-86-7
Xiga: Shiinaha GMP warshad waxay bixisaa 100% Saliid ah Kaafuur saliid lagama maarmaan ah
Daahir daahir ah oo dabiici ah geed shaaha saliida lagama maarmaanka ah ...
100% Alpha Pinene dabiici ah oo saafi ah CAS 7785 badan ...
Shiinaha GMP warshad bixiyaan 100% saafi ah iyo Dabiiciga e ...
Soosaar daahir ah oo dabiici ah Arnica Oil oo kujirta daryeelka jirka